Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Izu Ejiji Seychelles n'ihe ngosi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ejiji • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Izu Ejiji Seychelles
Edebere ebe njem agwaetiti a na ntụpọ dị ka izu ụka Ejiji Seychelles kwa afọ malitere mbipụta nke anọ na Fraịde Nọvemba 26, 2021, na L'Escale Hotel na Mahe.
Site na ihe ngosi ejiji abụọ na-ewere ọnọdụ na Satọde, Nọvemba 27, ihe omume ahụ hụrụ ọnụnọ nke ndị na-emepụta ejiji na mba ụwa na ndị na-eme ihe si ebe dị ka Paris, Qatar, UK na USA.
N'ịbụ onye nọ na mwepụta ahụ, na-ekwu okwu dị mkpirikpi, onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, Oriakụ Sherin Francis, kwupụtara obi ụtọ ụlọ ọrụ ahụ maka mmemme ahụ. "Seychelles nwere ikike ịghọ ebe ejiji na-ewu ewu, ebe paradaịs anyị mara mma na-eje ozi dị ka ihe mkpali nye ndị na-emepụta ihe na ndị na-eme ihe nkiri ndị ọzọ," Oriakụ Francis kwuru.
Ọ gbakwụnyere na ihe omume ahụ na-emepe ụzọ maka ebe a na-aga iji webata nnukwu ihe omume ga-eme ka ọ pụta ìhè ma kwalite njem nlegharị anya Ejiji. International mkpuchi nke ndị Seychelles Ụlọ ọrụ mgbasa ozi abụọ sitere na Ghana na South Africa nyere izu ejiji.
Seychelles Ejiji Izu na-emepụta ikpo okwu zuru ụwa ọnụ maka ndị na-emepụta obodo na ndị omenkà iji gosi na kwalite ọrụ ha, yana omenala creole na ọkwa zuru ụwa ọnụ, na-abawanye nnabata mba ụwa maka ebe a na-aga na akụ ya.
Tọrọ ntọala na 2018, ihe omume ahụ na-ahụ mmekorita nke Ministri dị iche iche, gụnyere Ministry of Foreign Affairs and Tourism, ndị mmekọ njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ, ndị mmekọ mgbasa ozi na ndị na-akwado mmesapụ aka.